Ihe a na - akpọsa ụgbọ mmiri n’ahụ́, Chain na - ejikọta ụlọ ọrụ a na - akpọsa ụgbọ mmiri na - China Boegger
Unu nọ ebe a:Ụlọ > Products > Architectural Mesh > Ụdị:>Ịgba n’Ụzọ
A na - akpọkwa ákwà ígwè n’agbụỤzọ ígwè a na - anọ. N’ozuzu ọnụ, a na - eji ya n’ahụ́ n’ahụ́, wita aluminium, wita nke ọla ma ọ bụ ihe ndị ọzọ. Ọ bụ ụdị ọhụrụ nke ákwà ígwè dị elu dị ka ákwà a na - akpọ n’ákwà na ákwà e ji ígwè a na - eji ebe nile eme ihe n’ebe nile a dị ka ákwà n’ụlọ, Ụlọ Nzukọ iri iri nri, iche n’okpuru, a na - achọ ya mma, mma n’ihe ngosi ahịa na nchebe anyanwụ, Nd. N’iji tụnyere ákwà ọnụ ọdịnala, a na - egbochi ígwè nwere ihe ndị a na - eme ka a ghara ịkpọ ọkụ n’ahụ́, a na - enwe mmekọahụ, N’ihi ya, o nwere ndụ ije ozi karịrị ogologo. N’ihi ihe ndị dị oké ọnụnọ na ihe ndị dị irè, a họrọla drapery coil dị ka ụdị ịchọpụta nke taa site nnọọ n'aka ndị na - emepụta ya.
MCD-02 Ọlaọ Ọlaọ Mpịa
LMaterial: ígwè, ígwè, kopa, aluminium alloy, ebe dị ala carbon akụ̀, n’akwụkwọ.
Ucha: ọlaọcha, ọlaedo, ọlaedo, ọlaedo odo odo, ojii, acha, ọbara ọbara, ụcha mbụ ma ọ bụ n’ụcha ndị ọzọ.
Ụfọdụ n’ebe a na - anọ: 0.5 mm - 2 mm.
Ọnụ ahịa: mm 3 - 20 mm.
Ebe emeghe: 40% - 85%.
Nkà: 5.5 mm - 7.1 mm.
Ubi: 4.2 kg / m2 - 6 kg / m2. (dabere n’ihe ndị a họọrọ)
Ogbugha na ohie: emeredịkachọrọ.
Ọgwụgwọ a na - arịa: Pickling, anodic oxidation, a na - enye varnish ma ọ bụ a na - apị.
Ọ bụrụ na e jiri ụzọ ndị ọzọ tụnyere, ịkpa ihe na - adị nnọọ mfe karị. Nke a na - eme ka a ghara ịna - ewepụ oksịd ma ọ bụ ihe ndị e dere n’elu ahụ́. Àgwà dị n’okpuru n’okpuru pụrụ ịnọ ogologo oge n’agbanyeghị nzọ ma kwụsị.
Site n’ịkụta ihe ndị a na - achọpụta ihe dị ka ihe dị n’ahụ́, ọ na - eji oké ọkụ na - eme ihe iji mee ka fim na - echebe n’elu ahịhịa. Ụdị mkpụrụ a yiri n’ahụ́ nke a. Anodic oxidation pụrụ ibuwanyi a na-agwuregwe na ngwa ngwa nke ihe ahụ. N’ụzọ dị otú ahụ, a pụrụ iwepụta ya ụcha ọ bụla ị chọrọ.
Ịgba varnish bụ ụzọ a na - enwe ụcha, bụ́ nke a na - achị n’elu n’elu ma na - ejikaị ụcha ahụ́ ndị ahụ ma na - esi n’ahụ́ ígwè. Mgbe a tụsịrị ákwà n’elu n’elu, ọ ga - anọ n’ọnụ okpomọkụ iji nweta ụcha na - adịgide adịgide. Àgwà ndị a na - esi n’ahụ́ n’ahụ́ a ga - enwe mmasị ma mara mma.
MCD-03 Metal Coil Drapery nwere ụcha na ụhara dị iche iche.
MCD-04 Mmgbe Coil Drapery Samples Katalogị̀ọ́ọ̀gụ̀
Ihe ndị ahụ:
Ịdị mara mma - emepụta mmetụta na - achọ n’anya.
LMildew na ihe àmà - a na - ekwesịkwa maka ebe a na - ebere.
Iji otu ákwà iji ehichapụ ya.
Ihe enyi n’ebe a na - 100% a pụrụ ịzụzigharị.
LRust iguzogide - aṅụkwa oge na - adịgide.
Ịnyịnye n’ihe dị mfe - dị mfe na ụlọ a na - agbanwe mgbanwe.
Ịgbaso ike n’ụzọ dị ukwuu na ezigbo ike.
Iji ụgbọ mmiri na ụdị ìhè - edebe ikuku ọhụrụ ma mee ka ìhè dịkwuo.
Ọ̀tụ̀tụ̀ oké ọnụ - ịmata ihe dị iche iche, egbochi pụrụ iche na ike.
Igbochi lFire - ọ dịghị ewu.
Ụdị ụcha na ụhara - a pụrụ iji ya na usoro ihe dị iche iche.
Ụdị nkọzi na ụdị a na - eju ajụjụ ndị ahịa n’ahụ́ nke ukwuu.
Dị ka ihe ndị dị iche iche e si kwuo, a pụrụ iji ihe e ji ígwè mee ihe n’ọtụtụ ihe e ji eme ihe n’ụlọ n’ọtụtụ ihe e ji eme ihe n’ụlọ. Ya mere, a pụrụ iji ákwà ígwè dị ka:
L Interior partie.
LDoor na - akwụsị.
Ọnụ ụzọ nchebe.
Ụfọdụ n’ime ya.
Ụfọdụ n’ebe a na - akpọ n’ebe a na - akpọ.
Ịkpa a na - achọ n’ahụ́.
Akwụkwọ a na - akpọ mgbidi.
Mmadụ nchebe n’ahụ́.
Ụdị mkpụrụ obi.
N’ihi ọtụtụ ọrụ ya, e kwesịrị ekwesị maka:
Ụlọ Ụlọ Nzukọ ụlọ ọrụ.
Ụfọdụ n’ebe a na - akpọsa.
Ụlọ ụlọ nzukọ ndị a.
Ụlọ Nzukọ ya.
MCD-07 Mgba Nọpụta Drapery
MCD-08 Metal Coil Drapery Curved Forck Usoro usoro
MCD-09 Mgbe egbochi n’ime ụgwọ n’ahụ́
MCD-10 Metal Coil Mesh a na-akwụkwọ dị ka òtù egwú
MCD-11 Metal Coil Mesh a na-akwụkwọ dị ka Onye Na-akwa Ụlọ Akwụkwọ
MCD-12 usoro ihe omume n'ime MCD-12 nke Mgba n'ime Ihe n'ime Ihe n'ime n'ime n'ime ahụ
Nke mbụ, a na - akpọsa ákwà ígwè n'okpuru n'akwụkwọ n'akwụkwọ mmiri ma ọ bụ fim na plastik, ma tinye ha n'akati, Ị na - arịọ n’ihe ndị ị na - arịọ.
MCD-13 Metal Coil Mesh nke Plastic Film Pake
MCD-14 Mgba Mgbe Mgbe Mkpịsa n’Ebe Oké Osimiri Ahụ
Anyị nwere ụzọ atọ e si egbochi ígwè.
U ịnyịnye n’ụgbọala, a na - ewunye n’ahụ́ H na a na - enweghị ntị n’ahụ́.
H track dị nnọọ mgbanwe dị elu, o nwere ike ịma aka n'ụdị ọ bụla ma ọ bụ iguu ọ bụla iji dabe n'ohere na ọdịdị nke kọkọta, ma ọ bụ maka mgbidi ma ọ bụ ugwu a na - eburu.
Maka mgbanwe U, nzuzo ụdị ọrụ dị iche iche na nchịkwa àgwà na-aka nrụ ya siri ike ma mee ka ọ na - emepụta ezigbo ihe n’ihe banyere ịtọ n’aka.
Ọ na - adịkwa mfe ịkwụ ígwè a na - akwụsị n’akwụkwọ ígwè.
A na - eme ihe ndị a na - eme ka a na - eji ihe ndị a na - enwe n’ahụ́. Ha abụọ na - alụ ọgụ ma na - eguzogide nzọ. Ụgbọ mmiri atọ a nile na - enwe nkwado akpụkpọ n’akwụkwọ ndị a na - efe n’efu, bụ́ ndị pụrụ ịnagide ákwà nile dị arọ.
E tinyere n’ahụ́ n’ọrọ
Ihe e dere n’ahụ́ n’ụgbọala U.
Ọzọrụ:Ụzọ a Na - akụkụ Akwụkwọ
Mwagụ̀ metal coil drapery, metal coil curtain, chain link mesh,
Ịrụ foto nke ọ̀tụ̀tụ̀ nnwale
Ịrụ foto nke ọ̀tụ̀tụ̀ nnwaleỤzọ aịdụA na - eji ebe nile eme ihe n’ime ụlọ ọrụ n’ihi nkà mmụta ọnụ ọgụgụ ya. Na n'ebe ahụ, AC node nke ọ bụla pụrụ ịnweta ngwa Ethernet, na - emepụta kpakpando, ka AC no...
Otú Ị Ga - esi Atụta Ụzọ Ịgba Ụzọ Ụzọ?
Otú Ị Ga - esi Atụta Ụzọ Ịgba Ụzọ Ụzọ?Bipụta gịỤdị njidịKọrịIhe a na - egosi na a na - egosi n’ihe osisi ahụ. Ọ bụrụ na ihe atụ bụ 2 "egwu wire ahụ bụ 9 ma ọ bụ 11. Ọ bụrụ na ihe atụ ahụ bụ 2 1/4 "ma ...
Ihe e dere n’Ebe Ọkụ n’Ebe Ọkụ
Ihe a na - akpọ n’akwụkwọỤzọ ígwè a na - akwụ, A na-emekarị site na wire akụkụ akpụ ma ọ bụ wire aluminium alloy, a na-electpolis, electrophoresed, a na-eprese, a na - anọ n’ahụ́, ma ọ bụ a na - ese e...